सुदूरपश्चिममा ३३ प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित निको भए « Lokpath
भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमित भएकामध्ये ३३.९५ प्रतिशत निको भएर घर फर्किसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा गरेर तीन हजार ७५८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ ।
प्रदेशमा पहिलोपटक गत चैत दोस्रो साता दुबईबाट घर फर्किएका कैलालीको धनगढीका एक युवकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो । निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म कोरोना पुष्टि भएका एक हजार २६७ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । पिसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षणका लागि २६ हजार ९९१ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकामा शनिबारसम्म ९११ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा गुणराज अवस्थीले प्रदेशमा कोरोना जित्नेको दायरा बढ्दै गइरहेको बताए । “अन्यत्रभन्दा यहाँ निको भएर जाने अवस्था निकै सन्तोषजनक छ”, उनले भने, “हामीले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।”
उनले सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको पिसिआर विधिबाट परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन भइरहेको बताए । प्रदेशका स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा हाल चार हजार ९७३ जना भारतलगायत बाहिरबाट आएर बसिरहेका छन् । “जेठमा यहाँका क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या ६६ हजारभन्दा बढी थियो”, निर्देशक डा अवस्थीले भने, “अहिले भारतबाट आउनेको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छ ।”
उनले भिडिएमलगायतका स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण स्वाब सङ्कलनमा केही ढिलाइ भइरहेको बताए । “कैलाली जिल्लाका क्वारेन्टिनमा रहेकाको स्वाब सङ्कलन आज करिब ७० प्रतिशत सकिन्छ”, अवस्थीले भने, “अन्य जिल्लामा पनि सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।” उनले भारतबाट स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेका कम्तीमा एक हप्तापछि स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको बताए ।
“क्वारेन्टाइनमा बस्नासाथ स्वाब सङ्कलन गर्न मिल्दैन”, उनले भने, “कम्तीमा सात दिन भएकै हुनुपर्छ ।” निर्देशनालयका अनुसार सङ्क्रमितमध्ये दुई हजार ८९० पुरुष र ८६८ महिला रहेका छन् । सङ्क्रमितमध्ये ८१ जना मात्रै विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् भने बाँकी स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् । रासस
प्रकाशित मिति: २०७७,असार,२८,आईतवार २०:४६
कुन प्रदेशमा कति छन् आइसीयूमा ? (ताजा विवरण)
काठमाडौं । नेपालमा हाल १ हजार बढी आइसीयूमा रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनस्ंख्या मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालमा
काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४२ हजार ६ सय नाघ्यो, काठमाडौंमा मात्रै ३१ हजार बढी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४२ हजार ६ सय ६६ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । काठमाडौंमा ३१ हजार ७३
नेपालमा संक्रमित र मृतकको संख्या उकालो लाग्दै : सबैभन्दा बढी कुन उमेर समूह प्रभावित ? (विवरणसहित)
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार ९ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै